“Bale Wuxuu ku soo baxayaa Manchester United” – Scholes
HomeSuuqa“Bale Wuxuu ku soo baxayaa Manchester United” – Scholes
Paul Scholes ayaa kula taliyey weeraryahanka Gareth Bale in uu ka tago Real Madrid oo uu u wareego Manchester United oo uu tilmaamay in ay tahay kooxda ugu habboon ee uu qaab ciyaareedkiisu ku soo baxayo.
Laacibka reer Wales ee Bale ayaa u wareegay naadiga ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid xagaagii hore, waxaanu ka caawiyey in ay ku guuleystaan Champions League iyo Copa del Rey, hase yeeshee wixii intaa ka dambeeyey wuxuu la kulmay dhibaatooyin yadoo ay taageereyaasha Real Madrid ka soo horjeedsadeen qaab ciyaareedkiisa, isla markaana ay marar badan ku qayliyeen isagoo ciyaaraya kubadda. Waxa intaa u dheer in xattaa taageereyaasha kooxdaasi ay weerar ku qaadeen markii ay dhamaatay ciyaartii Barcelona ay ka badisay kooxdiisa, isaga oo markaas isku dayayey in uu gaadhigiisa fuulo ayay ku dageen raxan taageereyaal ah. Tani waxay keentay in la isla dhex maro in uu dib ugu laabanayo UK oo uu ku biiri doono mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee Premier League, iyadoo ay ku adag tahay in uu u dulqaato dhacdooyinka uu kala kulmay Madrid.
Haddaba, Scholes oo ka hadlay arrinta ciyaartoygan ayaa sheegay in 25 jirkan ay la gudboon tahay in uu si degdeg ah ugu laabto Ingiriiska oo uu heshiis la saxeexdo tababaraha Manchester United ee Louis van Gaal kaas oo uu tilmaamay in uu horumarin doono ciyaartiisa, isla markaana uu la mid noqon doono xiddighii waaweynaa ee Cantona iyo Ruud van Nistelrooy.
“Waxa aan dareensanahay in kooxda ugu habboon ay tahay Manchester United.” Sidaas ayuu Scholes ku qoray bogga Evening Standard.
“Dabcan, inkasta oo aan taageero kooxdaydii hore waxa aan jeclaan lahaa in uu halkaas tago, mar kastana waxa aan dareemaa in dabiiciyan uu Bale ku habboon yahay United oo uu xirfaddiisa ku horumarin karayo sidii Tottenham oo kale.” Ayuu raaciyey Scholes.
“Jacayl ayuu ka heli lahaa Old Trafford, waxaanan aaminsanahay in haddii uu soo laabto uu shidi lahaa kooxda Louis van Gaal xili-ciyaareedka dambe. Sannadkaygii ugu horreeyey ee aan u ciyaaray Manchester United waxaan goob-joog u ahaa ciyaartooyo cusub oo haddana kooxda wax badan u qabtay.
“Laga soo bilaabo Eric Cantona oo aan kooxda yaryar ku jiray, illaa Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy iyo Rooney, waxa jiray ciyaartooyo halyeeyo ku noqday United. Bale waxa uu leeyahay suurtogalnimada in uu kooxda ku yeesho saamayn ka badan tii ay raggaas hore ku yeesheen.” Ayuu hadalkiisa ku soo afjaray Paul Scholes.
Sirta Guulaha Chelsea Oo La Shaaciyey iyo U Diyaar-garowga Mananchester United
17/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Arsenal Oo Ku Dur-durisay Bournemouth Kaalinteediina Sii Xejisatay
Tababare Lagu Eedeeyey Inuu Kufsado Ciyaartoygiisa
30/11/2016 Abdiwahab Ahmed